नेपाल आइडलबाट बाहिरिइन् ‘गोल्डेन माइक’ विजेता नीलिमा – Bihani Khabar
Home / Entertainment / नेपाल आइडलबाट बाहिरिइन् ‘गोल्डेन माइक’ विजेता नीलिमा
काठमाडौं : नेपाल आइडलको सुरुदेखि नै आफ्नो स्वरको जादु चलाउन सफल पोखराकी नीलिमा थापा शुक्रबारको इपिसोडबाट बाहिरिएकी छन्। नीलिमाले भर्खरै कक्षा १२ सकाएकी छन्। धेरैजनालाई साथी बनाउन नसक्ने रिजर्भ स्वभावकी नीलिमाले आइडलबाट बाहिरिएपछि सधैंभरि गायनलाई नै साथी बनाएको बताइन्। भन्छिन्, ‘गीत नै मेरो साथी, गीत नै मेरो जिन्दगी।’
शुक्रबार कार्यक्रमबाट बाहिरिनेमा आफ्नो नाम सुनेपछि उनी एकाएक स्तब्ध बनिन्। आँखाबाट खस्नखस्न लागेको आँसु लुकाउँदै उनी जबरजस्ती हाँस्न खोजिरहेकी थिइन्। उनले नेपाल आइडलले आफूलाई विशेष प्रकारको नाम र पहिचान दिएकोमा कार्यक्रमको खुलेर प्रशंसा गरेकी थिइन्। शुक्रबारको प्रस्तुतिमा पफमर अफ द डे अमित बरालले पाए। सर्वाधिक भोट सुमित पाठकले पाए भने अस्मिता अधिकारी र विक्रम बराल बटम थ्रीमा परे ।
निलिमा बाहिरिएसँगै आइडलमा सुमित पाठक, विक्रम बराल, रवी ओड, अस्मिता अधिकारी, अमित बराल र पवन गिरी छन्। आइडलको प्रतिस्पर्धा झन्झन् रोमाञ्चक बनिरेको छ। कसलाई प्रशंसा गर्नु कसलाई के भनेर कमेन्ट गर्नु ? गल्ती पनि निकै कम मात्र भेटिन्छ। नेपाल आइडलको पछिल्ला हरेक कार्यक्रम विशेष बनिरहेका छन्। आइडलको जजमा न्ह्यु वज्राचार्य, इन्दिरा जोशी र कालीप्रसाद बास्कोटा छन्।
‘मन जित्छ उसले, राम्रो गाउँछ जसले’ नाराका साथ नेपाल आइडल सिजन-२ गत साउन २४ देखि सुरु गरिएको हो। नेपाल आइडलका च्यानल हेड लक्ष्मीप्रसाद पौडेल हुन् भने प्रोजेक्ट हेड सुरेश पौडेल छन्। कार्यक्रम निर्देशकहरू सुरेश पौडेल, लोकेश वज्राचार्य र एलन श्रेष्ठ छन्।sources:news khabar
Previous आज सम्म कती पटक तपाईहरुले शारीरिक सम्पर्क गर्नु भो भन्दा,बखतले यस्तो जबाफ दिदा प्रतिभा भुतुक्कै ( हेर्नुहोस् भिडियो सहित् )
Next बलात्कार गर्नेलाई ८ वर्ष कैद, पीडितलाई ३० हजार क्षतिपूर्ति
हराएको १४ घण्टापछि भेटियाे बालककाे सव, घटना रहस्यमय
शिवको जटामा बसेर जल फ्याँक्ने देवी को हुन? यस्तो छ कथाप्रसङ्ग
वाणिज्य बैंकको ९ करोड घोटाला प्रकरणः दुई पक्राउ, मुख्य अभियुक्त फरार